घाईते धवनलाई टिममा राख्ने कि ऋषभ पन्तलाई ल्याउने ? पहिलो पटक कप्तानले खोले रहष्य – Nepal Trending
घाईते धवनलाई टिममा राख्ने कि ऋषभ पन्तलाई ल्याउने ? पहिलो पटक कप्तानले खोले रहष्य
काठमाडौं । चोटकै कारण करिब तीन साता मैदान बाहिर रहने भारतीय क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य शिखर धवन छिट्टै निको हुने र टिममा फर्किने कप्तान विराट कोहलीले बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियाविरुद्ध भारतले ३६ रनको जित हात पार्दा धवनले शतकसहित ११७ रन बनाएका थिए । अष्ट्रेलियाका बलर नाथन कउल्टर नाइलले बलिङ गरेको बाउन्सर बलले लागेर उनको देब्रे हातको बुढी औला फ्याक्चर भएको थियो ।
करिब तीन सातासम्म मैदान बाहिरै रहने भनिए पनि कप्तान विराट कोहलीले भने धवन टिममा छिट्टै फर्किने बताएका छन् । उनले भने, ‘धवनको हातमा दुई सातासम्म प्लास्टर हुनेछ । उनको अवस्था के हुन्छ । त्यसपछि हामी निर्णय गर्नेछौं ।
कप्तान विराटले थपे, ‘हामीलाई आशा छ उनको चोट चाँडै निको हुनेछ । लिग खेलमै उनी खेल्न सक्ने हुनेछन् ।’ धवन ठिक नभए उनको स्थानमा रिषभ पन्तले ठाउँ पाउने छन् । रिषभ यसअघि नै इंग्ल्यान्ड पुगिसकेका छन् । तर उनी भारतीय क्रिकेट टिममा भने छैनन् ।
फिफाको नयाँ वरीयतामा नेपाल चार स्थान घटुवा
विश्व फुटबल महासंघ फिफाको नयाँ वरीयतामा नेपाल चार स्थान तल झरेको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपाल ४ स्थान तल झर्दै १ सय ६५ औं स्थानमा पुगेको छ । नेपाल यसअघि १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको थियो ।
नेपालले यसै महिना मलेसिया र चाइनिज ताइपेइसँग २ वटा मैत्रिपूर्ण खेल खेलेको थियो जसमा एक खेलमा बराबरी र एक खेलमा हार बेहोरेको थियो । नयाँ वरीयता अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली स्तरमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपाल भन्दा माथि भारत १ सय १ र माल्दिभ्स १ सय ५१ औं स्थानमा रहेका छन् ।
नेपालभन्दा तल बंगलादेश १ सय ८३ औंँ, भुटान १ सय ८६ औंँ, श्रीलंका २ सय १ औँ र पाकिस्तान २ सय ३ औंँ स्थानमा रहेका छन् । विश्व वरीयतामा भने बेल्जियम शीर्ष स्थानमा छ । फ्रान्स दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो, इंङ्ल्याण्ड चौथो तथा पोर्चुगल पाँचौ स्थानमा रहेका छन् ।
रोहित शर्माको रेकर्ड तोड्दै किङ कोहलीले बनाए दुई नयाँ किर्तिमान
त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, शरद र बसन्त टिमबाट आउट
किङ कोहली चम्केपछि भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई सात विकेटले हरायो
फुटबल मैदानमा खेलिरहेका खेलाडीमाथि चट्याङ परेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
यसकारण सुटुक्क नेपाल आए इङ्ल्यान्डका पूर्व स्टार क्रिकेटर फ्लिनटफ
खुसिको खबर ! आईसिसिले क्यानको प्रतिबन्ध हटाउने
बहुउपयोगी फल ‘मेवा’ को एस्तो छ फाईदाहरु:
यी १० फल जसले शरीरलाई बलियो बनाउँछन्
टमाटरले एउटा होइन पाँच किसिमका क्यान्सरबाट रोक्छ
तौल घटाउन खाली पेट सुत्ने बानी छ ? तर, झनै...
दुई सोल्टीनी सहित दयाहाङ राई मिडियामा , भिलेन बनेर आए...
त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, शरद र बसन्त टिमबाट...